ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: လက်ပံတောင်းတောင်ဆန္ဒပြပွဲ (ရုပ်သံ)
နေကြတာပါ ၊ သံဃာတော်တွေကို မီးလောင်ဗုံးနဲ.
မီးတင်ရှို.သူတွေကိုတောင် ဥပဒေအထက်က ပုဂ္ဂိုလ် များရဲ.အကာအကွယ်ကြောင်. အရေးယူလို.မရတဲ.
ပြည်တွင်းမှာ တရားဥပဒေစိုးမိုးအောင် မလုပ်နိုင်သေးဘဲနဲ. နိုင်ငံခြား ခရီးကို အလုအယက် ၊
အပြိုင်အဆိုင် သွား ၊ သူများနိုင်ငံလွှတ်တော် တွေ
သွားကြည်.နေလည်း မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်သူများအတွက်
ဘာမှ ထူးလာမှာမဟုတ်ပါဘူး ။
.. ပြည်တွင်းက ဥပဒေအထက် ကသူတွေ ကိုထောင်ထဲ
ထည်.ရဲမှ ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းကို စလှမ်းနိုင်မှာ ။
Agree with HS..
The only first step to democracy goal, we must dare to send the man who are above the law to the jail.
ပြည်တွင်းက ဥပဒေအထက် ကသူတွေ ပြစ်မှုကျူးလွန်တာ
ကို အရေးမယူရဲ ၊ ထောင်ထဲမထည်.ရဲဘဲနဲ.
...... နိုင်ငံခြား လွှတ်တော်တွေ သွားလေ.လာ လည်း ဘာလုပ်မှာလဲ ၊
.... အဲဒီက လွှတ်တော်တွေ လေ.လာပြီး
နေပြည်တော်က လွှတ်တော်ကို ထိုင်ခုံတွေ ဆိုဖါတပ်မှာလား ၊
... LED SCREEN တွေ လွှတ်တော် ခန်းမမှာတပ်မှာလား?
ဒါမှမဟုတ် အခွင်.အရေး ရတုန်း နိုင်ငံခြားကိုသွားလည် မှဆိုပြီး
.. လုပ်မှလည်း ဟုတ်စမ်း ပါ ။
DR' Aung Gyi said...
ပြောတော့ ** ကတော့ ချိုမိုင်မိုင်တဲ့